गोपनीयता र कुकी नीति - Ningbo MH
वेबसाइट गोपनीयता नीति (सीएन)
नोभेम्बर 9, 2014
हामी को हुन् र यस गोपनीयता नीति को उद्देश्य के हो?
यो गोपनीयता नीतिले बताउँछ कि MH उद्योग ("MH", "we" वा "us") ले तपाईले यो वेबसाइट प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत सूचनाको प्रयोग गर्दछ र कसरी सुरक्षा गर्दछ।
व्यक्तिगत सूचना भनेको जानकारी हो जुन तपाई जीवित व्यक्तिको रूपमा पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ, चाहे आफैले वा कहिलेकाहीँ हामी अन्य जानकारी संग संयोजनको रूपमा प्रयोग गर्यौं जुन हामीले होल्ड गर्छौं वा सम्भावित हो। यो गोपनीयता नीति बताउँछ कि हामी यस वेबसाइट को प्रयोग गर्दा हामीले तपाइँबाट एकत्रित व्यक्तिगत जानकारी कसरी प्रयोग गर्दछौं र सुरक्षा गर्दछौं।
यदि तपाइँसँग यो गोपनीयता नीतिको बारेमा कुनै प्रश्न वा तपाइँको व्यक्तिगत जानकारीको प्रयोग हाम्रो कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। कृपया तल "हामीलाई कसरी सम्पर्क गर्ने" खण्डमा जानुहोस्। त्यस खण्डमा हामीले हाम्रो दर्ता कार्यालय ठेगाना, हाम्रो टेलिफोन नम्बर र हाम्रो ईमेल ठेगाना सेट गर्यौँ।
के तपाई यो गोपनीयता नीतिसँग खुसी हुनुहुन्न भने?
यदि तपाईं आफ्नो व्यक्तिगत जानकारी यो गोपनीयता नीति अनुसार अनुसार सहमत हुनुहुन्न भने तपाइँ तुरुन्तै यो वेबसाइट प्रयोग गर्नबाट टाढा रहनु पर्छ। कृपया ध्यान दिनुहोस् कि तपाईं यो वेबसाइट मार्फत सामानहरू वा सेवाहरू खरीद गर्न सक्षम हुनुहुँदैन जब सम्म तपाईले हामीलाई केहि व्यक्तिगत सूचना पेश गर्नुहुन्न ताकि तपाईले यो वेबसाइट प्रयोग गर्न दर्ता गर्न सकिन्छ र हामी तपाईंको अर्डर प्रशोधन गर्न सक्दछौं।
यो गोपनीयता नीतिको लागि अद्यावधिकहरूको बारेमा के हो?
हामी यो गोपनीयता नीति यस पृष्ठ को अपडेट गरेर समय समयमा समय परिवर्तन गर्न सक्दछौं। तपाईंले नियमित रूपमा यो पृष्ठ समीक्षा गर्नुपर्छ। परिवर्तनका लागि यो वेबसाइटको तपाईंको निरन्तर प्रयोग यो गोपनीयता नीतिको लागि बनाइनेछ जुन तपाईंले कुनै पनि परिवर्तनहरू पढ्नु भएको र स्वीकार गर्नुभएको छ भनेर संकेत गर्नेछ। यदि तपाईं यो गोपनीयता नीतिमा कुनै पनि परिवर्तनहरूसँग प्रसन्न हुनुहुन्न भने तपाइँ यो वेबसाइट प्रयोग गर्नुपर्दैन र तपाइँले हामीलाई बताउनुपर्दछ कि यी परिवर्तनहरू यसको मतलब हो कि तपाई अब हामी व्यक्तिगत डेटा प्रयोग गर्ने तरिकासँग प्रसन्न हुनुहुन्न भने।
हामी कुन व्यक्तिगत जानकारी सङ्कलन गर्छौं?
यदि तपाइँ हाम्रो ग्राहकहरू हुनुहुन्छ (यसमा व्यवसायिक ग्राहकहरू र ग्राहकहरू दुवै समावेश छन्) र यदि तपाईं हामीलाई यो वस्तुहरू र सेवाहरू खरीद गर्नका लागि (यसका लागि) यस वेबसाइटको निश्चित पृष्ठहरू प्रयोग गर्न दर्ता गर्नुहुनेछ, हामी तपाईंलाई ती पृष्ठहरूको पहुँच प्रदान गर्नेछौं। । हामी दर्ता गर्ने प्रक्रियाको एक भागको रूपमा हामी तपाईंलाई व्यक्तिगत जानकारी सङ्कलन गर्न सक्दछौं; अनलाइन आदेश प्रक्रियाको भागको रूपमा; र तपाईंलाई सिधा मार्केटिंग मा पठाउन को लागी तपाईंको सहमति प्राप्त गर्न को लागि। व्यक्तिगत जानकारी तपाईले तपाईबाट संकलन गर्न सक्नुहुनेछ:
तपाईंको नाम, जन्म मिति र सम्पर्क जानकारी (जस्तै पोष्ट र इ-मेल ठेगाना (es) र टेलिफोन नम्बर (हरु);
हाम्रा उत्पादनहरू र सेवाहरूसँग तपाईंको अनुभवहरूको बारेमा जानकारी;
तपाईंको MH प्रयोगकर्ता ID (जो कोट तपाईले प्रदान गर्दछ) र तपाईले पासवर्ड (जुन तपाई सेट अप गर्नुहुनेछ)। तपाईलाई यो वेबसाइट प्रयोग गर्न लगइन प्रत्येक पटक तपाईंको प्रयोगकर्ता आईडी र पासवर्ड उपलब्ध गराउनु हुनेछ।);
तपाईंको सिधा मार्केटिंग सम्पर्क प्राथमिकताहरू र सहमतिहरू (कृपया थप जानकारीको लागि तल "सीधा मार्केटिंग" खण्ड हेर्नुहोस्);
तपाईंको क्रेडिट / डेबिट कार्ड विवरण; र
(केवल व्यापारिक ग्राहकहरु को सम्बन्ध मा) तपाईंको व्यवसाय र यसको सञ्चालन को विवरण, जुन केहि व्यक्तिगत जानकारी शामिल हुन सक्छ।
यो सूची पूर्ण छैन र यो भविष्यमा अपडेट हुन सक्छ। यो हाल हामी मध्ये एकत्रित हुन सक्ने व्यक्तिगत जानकारी को एक उचित प्रतिबिम्ब हो।
हामीले व्यक्तिगत जानकारीको साथ के गर्छौ जुन हामीले सङ्कलन गर्छौ?
हामी तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी वैध व्यावसायिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्नेछौं, उदाहरणका लागि:
यो वेबसाइट र हाम्रो अनुबंध वा तपाईंसँग सम्बन्धित सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न, साथै तपाइँसँग हाम्रो उत्पादन र सेवाहरू प्रदान गर्न;
हामीले यो वेबसाइटलाई प्रयोग गर्ने उत्पादन र सेवा सुधार र हाम्रो मार्केटिंग र विज्ञापन गतिविधिहरू र बजार सुधारका उद्देश्यहरू सुधार गर्न सम्बन्धित परिमार्जन गर्न को लागी एक तरीकाको विश्लेषण गर्नुहोस् (हामी यस उद्देश्यका लागि तपाईलाई सम्पर्क गर्न सक्दछौं वा तेस्रो पक्षहरू सोध्दछौं। हाम्रो तर्फबाट यसो गर्न - कृपया खण्डलाई हेर्नुहोस् "हामी यो जानकारी कसले संग साझा गर्दछौं" तल);
सम्झौता गर्न र कुनै पनि संचार, अन्वेषण वा आवेदनको जवाफ दिंदा तपाईंले हामीलाई पठाउनुभयो;
तपाइँका उत्पादनहरू र सेवाहरूको बारेमा तपाईलाई प्रत्यक्ष मार्केटिंग पठाउनुहुन्छ (तर जब मात्र तपाईंले अनुमति दिनुभएको उपयुक्त सहमतिहरू - कृपया तल "सीधा मार्केटिंग" मा उल्लेख गर्नुहोस्); र
हाम्रो कानूनी, नियामक र अन्य राम्रो प्रशासन दायित्वहरूको अनुपालन गर्न।
यो सूची पूर्ण छैन र यो भविष्यमा अपडेट हुन सक्छ। यो केहि हालको उद्देश्यहरूको निष्पक्ष प्रतिबिम्ब हो जुन हामी तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी यस वेबसाइट मार्फत संकलन गर्न सक्छौं।
हामी तपाईंको व्यक्तिगत जानकारीसँग कसलाई साझा गर्छौं?
तल विस्तृत रूपमा बाहेक, हामी तपाईंको अनुमति नभएसम्म तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी तेस्रो पक्ष (कुनै अन्य व्यक्ति वा संगठन) लाई स्थानान्तरण, खुलासा, बेच्न, वितरण वा वितरण गर्न सक्दैनौं जबसम्म हामी तपाईंको अनुमति छैन वा कानुनी वा कानुनी प्रक्रियाले यसलाई प्रकट गर्न अनुमति छैन।
हामी तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी अर्को वैयक्तिकर्ता वा संगठनमा बिक्न सक्छ जहाँ हाम्रो वैध व्यापार प्रक्रियाहरूको भाग आवश्यक पर्दछ (जस्तै, हाम्रो व्यवस्थापन वा प्रशासन बाह्य संस्थाद्वारा लिइने कार्यक्रममा)। हामीले यो गरौं कि हामी यो सुनिश्चित गर्दछ कि यो अधिनियम अनुसार गरे।
हामी तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी कानुनी प्राधिकारीहरू (जस्तै अदालतहरू, ट्रिब्युनलहरू, प्रहरी वा सुरक्षा सेवाहरूमा) जारी गर्न कानूनी वा कानुनी प्रक्रियाद्वारा आवश्यक हुन सक्छ। यो वेबसाइट को ईमानदारी को बनाए राखन र आफ्नो ग्राहकहरु र ग्राहकहरु को हितों को रक्षा को लागि, हामी कुनै पनि यस्तो अनुरोध को पालन गर्नेछन। यसको अतिरिक्त, हामीले तपाईंको व्यक्तिगत जानकारीलाई सरकारी प्राधिकरणलाई कर वा अन्य उद्देश्यका लागि खुलासा गर्न आवश्यक पर्दछ। अन्य परिस्थितिहरूमा हामी यो पनि निर्णय गर्न सक्छौं कि हामी हाम्रो कानूनी जानकारी कानूनी प्राधिकरणहरू प्रकट गर्न एक वास्तविक कारण हो र एक प्रकटीकरण उचित र कानुनी अधिनियमको अधीन हुनेछ।
तपाइँको व्यक्तिगत जानकारी मा पठाइएको हुन सक्छ र MH समूहको सबै कम्पनीहरू द्वारा प्रयोग गरिन्छ, जसमध्ये केही मध्ये चीन बाहिरका छन्। हामी तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी ती अन्य कम्पनीहरूमा मात्र पठाउने छौँ जसले तिनीहरूलाई सेवाहरू प्रदान गर्न यो प्रक्रियालाई अनुमति दिन्छ।
यसको अतिरिक्त, परिस्थिति हुन सक्छ जुन हाम्रो ग्राहकहरु वा हाम्रो वैध हितको रक्षा गर्न बाह्य कम्पनीहरु वा संस्थाहरूमा तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी प्रकट गर्न आवश्यक छ। यस्तो अधिसूचनालाई अधिनियमको अनुमति दिइनेछ जुन उनीहरूको चासोहरूको रक्षा गर्न आवश्यक थियो र उनीहरूको हितमा ध्यान दिईनु आवश्यक थियो।
के तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी चीन बाहिर बाहिर हस्तान्तरण गरिनेछ?
तपाईले तपाईबाट सङ्कलन गर्ने डेटा पनि चीन बाहिर काम गर्ने कर्मचारीहरूले प्रशोधन गर्न सक्छ जुन हाम्रो लागि वा हाम्रो आपूर्तिकर्ता मध्ये एक काम गर्दछ। यस्तो कर्मचारीहरू अन्य चीजहरू बीचमा संलग्न हुन सक्छ, तपाईंको व्यक्तिगत डेटा, अर्डरको पूर्ति, प्रशोधन वा तपाईंको भुक्तानी विवरणहरू र समर्थन सेवाहरूको प्रावधान। तपाईंको व्यक्तिगत डेटा पेश गरेर, तपाईं यो स्थानान्तरणमा, भण्डारण गर्न वा प्रशोधन गर्न सहमत हुनुहुन्छ। हामी तपाईंको डेटा सुरक्षित रूपमा र यो गोपनीयता नीति अनुसार अनुसार सुनिश्चित गर्न सुनिश्चित गर्न सबै चरणहरू उचित रूपमा आवश्यक हुनेछौं।
जहाँ हामीले तपाइँलाई (वा तपाईंले रोजेका छनौट) पासवर्ड दिनुभएको छ जुन तपाइँले हाम्रो साइटको निश्चित भागहरू पहुँच गर्न सक्षम बनाउनुभएको छ, तपाईले यो पासवर्ड गोपनीय राख्नको लागी जिम्मेवार हुनुहुन्छ। हामी तपाईलाई सोध्दछौं कि तपाईसँग पासवर्ड साझा गर्न चाहनुहुन्न।
दुर्भाग्यवश, इन्टरनेट मार्फत जानकारीको प्रसारण पूर्ण रूपमा सुरक्षित छैन। यद्यपि हामी तपाईंको व्यक्तिगत डेटाको सुरक्षा गर्न हाम्रो सबै भन्दा राम्रो काम गर्नेछौं, हामी हाम्रो साइटमा पठाइएको डेटाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनौं; कुनै ट्राफिक भनेको तपाइँको जोखिममा छ। एकपटक हामीले तपाईंको जानकारी प्राप्त गरेपछि, हामी अनधिकृत पहुँच रोक्न प्रयास गर्न सख्त प्रक्रिया र सुरक्षा सुविधाहरू प्रयोग गर्नेछौं।
के तपाई चीनबाट बाहिरबाट यो वेबसाइट प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ?
यदि तपाईं चीनबाट बाहिरबाट यो वेबसाइट प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने अन्य नियमहरू तपाईंको व्यक्तिगत जानकारीको प्रक्रियामा लाग्न सक्छ। हामी यस वेबसाइटलाई चीन भित्रबाट काम गर्छौं। हामी तपाईंको देशको स्थानीय कानुनको अधीनमा छैनौं र यो गोपनीयता नीति यी कानुनी अनुपालन हुन सक्दैन। तपाईले तपाइँको व्यक्तिगत जानकारी हामीलाई हामीलाई पेश नगर्न नसक्नुसम्मसम्म तपाईं यस स्थितिमा खुसी हुनुहुँदैन।
अज्ञात जानकारी के बारे मा?
हामी पनि बजार र सामरिक विकास उद्देश्यको लागि समग्रमा (जस्तै कि व्यक्तिगत ग्राहकहरू पहिचान गर्न सकिँदैन) जानकारीमा प्रयोग र खुलासा गर्न सक्छौं। त्यो जानकारी तपाईंको व्यक्तिगत जानकारीको गठन गर्नुभएन किनकी तपाईं यसलाई पहिचान वा पहिचान गर्न सक्नुहुन्न। यसको मतलब यो होइन कि यो निजता नीति न त अधिनियम लागू हुनेछ।
हामी तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी कसरी सुरक्षित गर्छौं?
अनधिकृत पहुँच वा प्रकटीकरण रोक्न तपाईंको व्यक्तिगत जानकारीको क्षति वा हानि रोक्न हामी अधिनियम अन्तर्गत हाम्रा दायित्वहरू अनुसार, यस अन्तको लागि उपयुक्त भौतिक र इलेक्ट्रनिक, संगठनात्मक र प्राविधिक उपाय लिन्छौं। यसमा एन्क्रिप्शन समावेश हुन सक्छ (उदाहरणका लागि, यो वेबसाइट एक सुरक्षित साइट हो र यो साइटबाट प्रसारण र एन्क्रिप्टेड हुनेछ)।
तपाईं आफ्नो प्रयोगकर्ता परिचय र पासवर्ड को गोपनीयता को लागी जिम्मेदार हुनुहुन्छ जुन यो वेबसाइटको निश्चित पृष्ठहरू र / वा कुनै पनि खाता तपाईसँग हामी सेट अप गर्न सम्बन्धित छ। तपाईं समानसँग सम्बन्धित सबै गतिविधिहरूको लागि जिम्मेवारी स्वीकार गर्न सहमत हुनुहुन्छ। तपाईंले आफ्नो प्रयोगकर्ता आईडी वा पासवर्ड प्रयोग गर्न अन्य मानिसहरूलाई अनुमति दिनु हुँदैन। यदि तपाईंलाई विश्वास छ कि तपाईंको प्रयोगकर्ता आईडी वा पासवर्ड सम्झौता हुन सक्छ भने कृपया तल "हामीलाई सम्पर्क गर्न कसरी" खण्डमा विवरणहरू प्रयोग गरी सम्पर्क गर्नुहोस्। हामी तपाईंको जिम्मेवारी हुनुहुन्न भने तपाईंको लगइन विवरणहरू वा यस वेबसाइटमा अनधिकृत गतिविधिको बारेमा तपाईंको लग-इन विवरणहरूको परिणामको रूपमा अरू कसैलाई ज्ञात भएको रूपमा अनधिकृत पहुँच नभएसम्म यो हाम्रो लापरवाहीको कारण थियो।
सुरक्षा सम्बन्धी हाम्रा प्रयासहरूको बावजुद यो ध्यानमा राख्नु महत्त्वपूर्ण छ कि इन्टरनेट संचारको सुरक्षित माध्यम होइन। इन्टरनेट मार्फत व्यक्त गरिएको व्यक्तिगत जानकारी अन्य व्यक्तिद्वारा इन्टरनेट गर्न सकिन्छ। हामी यो वेबसाइट मार्फत पठाइएको व्यक्तिगत जानकारीको सुरक्षालाई ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनौं। तपाइँ स्वीकार गर्नुहुन्छ कि तपाइँ यो वेबसाइट तपाइँको आफ्नै जोखिममा प्रयोग गर्नुहुन्छ।
यो वेबसाइट 13 भन्दा कम उमेरका साना व्यक्तिहरू द्वारा प्रयोगको लागी इरादा छैन र यसैले हामीले 13 उमेर भन्दा कम निवासीहरूलाई अनुरोध गर्यौं भने यो वेबसाइट मार्फत हामीलाई कुनै व्यक्तिगत जानकारी पेश गर्दैन। हामी सिफारिस गर्दछौं कि आमाबाबु र अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई इन्टरनेटमा सुरक्षित रूपमा र उत्तरदायी रूपमा आफ्नो व्यक्तिगत डेटालाई सम्भावित गराउन सम्झाउँछन्।
यो वेबसाइटले अन्य वेबसाइटहरूको लिंक समावेश गर्दछ। यसको अतिरिक्त, हाम्रो नियन्त्रण बाहिर अन्य वेबसाइटहरू यस वेबसाइटमा लिङ्क गर्न सक्छन्। हामी अन्य वेबसाइटहरूको गोपनीयता प्रथा र सामग्रीको लागि जिम्मेवार छैनौं। तपाइँ सावधानी प्रयोग गर्नुपर्छ र प्रश्नमा वेबसाइटमा लागू गरिएको गोपनीयता कथन हेर्नुहोस्।
कुकीजहरू र वेब बीकनहरू
हामी हाम्रो "वेबसाइट" कुकीज प्रयोग गर्न सक्छौं। कुकीहरू डेटा फाईलहरू हुन् जुन तपाईंको हार्ड ड्राइभ वा ब्राउजरमा जानकारी भण्डारण गर्दछ जुन यसको अर्थ हो कि हाम्रो वेबसाइटले तपाइँले हाम्रो वेबसाइट भ्रमण गर्नु भएको छ। तिनीहरू यो वेबसाइटमा तपाइँका प्राथमिकताहरू कोयम राख्न सजिलो बनाउँदछ, र तपाईले वेबसाइट कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ, हामी यसलाई तपाइँका प्राथमिकताहरूमा दर्जी गर्न सक्छौं र यसको प्रयोगको माप पर्दछ।
तपाइँ, तपाईले रोज्न सक्नुहुन्छ, तपाईको ब्राउजरबाट कुकीहरू असक्षम पार्नुहोस् र हालै तपाइँको कम्प्युटरमा भण्डार भएका सबै कुकीहरू मेटाउनुहोस्। माइक्रोसफ्ट इन्टरनेट एक्सप्लोररमा, यो 'उपकरण / इन्टरनेट विकल्प' चयन गरेर तपाईंको गोपनीयता सेटिङ्हरूको समीक्षा गरी 'कुकीहरू मेट्ने' चयन गरेर गर्न सकिन्छ।
तपाईं ब्राउजरको मेनुमा 'मद्दत' क्लिक गरी तपाईंको विशेष ब्राउजरको लागि यो गर्ने कसरी पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। तथापि, तपाइँले कुकीहरू असक्षम गर्नुभयो भने हाम्रा थुप्रै वेबसाइट विशेषताहरू प्रकार्य छैनन्।
हामी पनि यस वेबसाइटमा "वेब बीकन" को रूपमा चिनिन्छ इलेक्ट्रोनिक तस्बिरहरू प्रयोग गर्दछ र यस वेबसाईटमा प्रयोग गरी उत्पन्न संचार र संचारमा, जस्तै प्रोमोशनल ईमेलहरू। वेब-बीकन सामान्यतया कुकीजहरूसँग संयोजनमा काम गर्दछ र तिनीहरू समान उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिन्छ।
हामीले कुकीमा प्रयोग गर्ने कुन परिभाषाको साथ तल दिईन्छ mh-chine.com मा प्रयोग गरिएका कुकिजहरूको पूर्ण सूची समावेश गरेको छ। कोटहरूले तपाइँको बारेमा व्यक्तिगत रूपमा पहिचान योग्य जानकारी एकत्र गर्न कुकीजहरू प्रयोग गर्दैन।
mh-chine.com Google Analytics, Google द्वारा प्रदान गरिएको एक वेब एनालिटिक्स सेवा को उपयोग गर्दछ। Google Analytics हाम्रो वेबसाइट को प्रयोग को मूल्यांकन र प्रयोगकर्ता गतिविधि मा रिपोर्ट संकलन गर्न एक कुकी सेट गर्दछ।
Google ले संयुक्त राज्यमा कुकीहरूमा एकत्रित गरिएको जानकारी भण्डारण गर्छ। Google ले यो सूचनालाई तेस्रो पक्षमा स्थानान्तरण गर्न सक्छ जुन कानूनले गर्दा त्यसो गर्न आवश्यक छ, वा त्यस्ता तेस्रो पक्षले गुगलको तर्फबाट जानकारीको प्रक्रियालाई प्रशोधन गर्दछ। गुगलले तपाईंको आईपी ठेगानालाई Google द्वारा आयोजित कुनै अन्य डेटासँग सम्बद्ध गर्दैन। Mh-chine.com को प्रयोग गरेर, तपाईं Google को बारे मा तपाईंको डाटा को प्रोसेसिंग र तरिका मा माथि को उद्देश्य को लागि सहमति मा सहमत हो।
mh-chine.com ले आपूर्तिकर्ताहरूको संख्या प्रयोग गर्दछ जसले सेवा प्रदान गर्ने सेवाहरू प्रदान गर्नको लागि हाम्रो तर्फबाट हाम्रो वेबसाइटमा कुकीहरू सेट गर्दछ। सबै तेस्रो पार्टी कुकीहरूको सूची जुन mh-chine.com मा प्रयोग गरिन्छ र प्रत्येकका लागि प्रयोग गरिन्छ के लागी तल देखा पर्दछ।
तपाईंको व्यक्तिगत जानकारीको पहुँच वा प्रतिलिपि प्राप्त गर्दै र प्राप्त गर्दै
यदि तपाइँले हामीलाई प्रदान गर्नुभएको कुनै व्यक्तिगत जानकारी मिति वा गलतबाट बाहिर जान्छ, कृपया हामीलाई ईमेल मार्फत वा पोस्टद्वारा "हामीलाई कसरी सम्पर्क गर्ने" खण्डमा विवरणहरू प्रयोग गरेर हामीलाई सम्पर्क गरेर थाहा दिनुहोस्।
यदि तपाईं पहुँच प्राप्त गर्न वा व्यक्तिगत जानकारीको प्रतिलिपि प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ जुन हामीले तपाईंको बारेमा सोचेको छ कृपया हामीलाई हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
यदि तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी प्रत्यक्ष मार्केटिंग उद्देश्यका लागि प्रयोग हुन सक्दछ भने हामी यो वेबसाइटको प्रासंगिक पृष्ठहरूमा स्पष्ट गर्नेछौं। एकै समयमा हामी सिधा मार्केटिंग प्राप्त गर्न तपाईंको सहमति खोज्छौं वा हामी तपाईंलाई यो प्राप्त गर्न अप्ट आउट गर्न अनुमति दिन्छौं (लागू कानुन अन्तर्गत आवश्यक के आधारमा)।
टेलिफोनद्वारा वा ई-मेल, एसएमएस, भ्वाईस मेल वा कुनै पनि अन्य इलेक्ट्रोनिक विध्वंसहरूद्वारा पठाएको सिधा मार्केटिङमा हामी प्रासंगिक विधि द्वारा थप प्रत्यक्ष मार्केटिंग गर्न इन्कार गर्न सरल तरीका प्रदान गर्दछौं। यदि तपाईले थप इलेक्ट्रोनिक मार्केटिंग गर्न अस्वीकार गर्नुभयो भने, हामी तपाईंको व्यक्तिगत डेटाबेस (हरू) बाट निश्चित रूपमा हटाउन सक्दैनौं तर चाँडो सम्भवतः हामी ध्यान दिनेछौं कि तपाईले तपाईको मन परिवर्तन गरेको छ। यसको मतलब यो हो कि हामी तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी (तपाईंको संपर्क विवरण सहित) एक सख्त फारममा रहन सक्दछौं, ताकि हामी तपाइँलाई अगाडी सम्पर्क नगर्नु पर्दछ।
यदि कुनै पनि समय तपाईं प्रत्यक्ष मार्केटिंग मार्फत आफ्नो मन परिवर्तन गर्न चाहानुहुन्छ जुन तपाईं कुनै पनि समयमा अप्ट आउट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं यो पनि यो वेबसाइट मार्फत आफ्नो प्राथमिकताहरू अपडेट गरेर वा ईमेलद्वारा सम्पर्क गरी "तल कसरी सम्पर्क गर्न" खण्डमा विवरणहरू प्रयोग गरेर पोस्ट गर्नुहुनेछ।
तपाईंको खाता को समापन र तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी को अवधारण
अधिनियमको अनुसार हामी यो सुनिश्चित गर्नेछौं कि तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी हाम्रो भन्दा वा कुनै तृतीय पक्षहरूले प्रासंगिक उद्देश्य (हरू) को लागी लामो भन्दा बढी भन्दा बढी राखिएको छैन।
हामी सेवा अस्वीकार गर्न वा पूर्व सूचना बिना हाम्रो खाता समाप्त गर्न अधिकार सुरक्षित छौं।
यदि हामीले तपाईंको खाता समाप्त गर्यौं भने तपाईले तपाइँको खाता रद्द गर्नुभयो भने, हामी यो चाँडै नै सकेसम्म बन्द गर्न सक्नेछौं र तपाइँको व्यक्तिगत जानकारी पछि मात्र कानूनी कठिनाइहरु वा अन्य समस्याहरु को लागी आवश्यक पर्दछ। त्यस अवधि पछि तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी हाम्रो डाटाबेस (हरू) बाट हटाइनेछ वा मेटिने छ।
अधिनियम तपाईंलाई तपाईंको बारेमा जानकारी पहुँच गर्न अधिकार दिन्छ। तपाईंको अधिकारको दावी अधिनियम अनुसार प्रयोग गर्न सकिन्छ। कुनै पनि पहुँच अनुरोध तपाईले तपाईको बारे जानकारीको विवरण प्रदान गर्न हाम्रो लागत पूरा गर्न £ 10 को शुल्कको अधीनमा हुन सक्छ।
हामीलाई कसरी सम्पर्क गर्ने
गोपनीयता र कुकी नीति घर विभाग - थ्रेडहरू --Zippers - रिबन र ट्याप रापहरू --उपकरण --बटन --इन्टरलाइनिंग --टस्टल र फ्रेिंग / Trimming --मेल सामाग्री --गुणहरू र सहायक उपकरणहरू - सिलाई मिसिन र पार्ट्स --Fabric - अन्य हाम्रोबारे - एमए अवलोकन --एमएच औद्योगिक --एमएच इतिहास --ट्रेड शोहरू --हाम्रो एजेन्टहरु - चित्र गैलरीज --भिडियो एल्बम हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस - स्थान स्थान - फिडब्याक सामुदायिक --ब्लग - एपी - हामीलाई भेट्नुहोस्